Beelo heshiis ku wada gaaray Dhuusa mareeb – Radio Muqdisho
Beelo heshiis ku wada gaaray Dhuusa mareeb
Shirka dib u heshiisiinta Beelaha wada dega gobolada Mudug iyo Galgaduud oo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa maanta waxaa laga soo saaray heshiis ay wada gaareen labo Beelood oo kamid ah Beelaha ku nool gobolada dhexe ee dalkeena Soomaaliya.
Heshiiskan ay maanta wada gaareen labada Beelood oo kamid ah Beelaha ka qeybgalaya shirka dib u heshiisiinta ee Dhuus Mareeb ayaa waxaa uu noqonayaa heshiiskii sadexaad oo laga soo saaro shirkan tan iyo markii uu halkaasi ka furmay.
Cabdulaahi Cadbi Kulimye oo kamid ah waxgaradka Beelaha heshiiska wada gaaray oo saxaafadda u akhriyay qodobadii ay ku heshiiyeen ayaa waxaa uu sheegay in labadan Beelood ay isku afgarteen in laga qeyb qaato dadaalada lagu dhisaayo maamul ay yeeshaan gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Waxgaradka labada dhimac ayaa waxaa ay sidoo kale baaq u direen dhamaan Jaalliadaha ka soo jeeda deegaanadan ay ka qeyb qaataan heshiisyadan.
Madaxweynaha Koonfur galbeed oo sheegay in ay heshiisyo la galeen dowlad deegaanka Ethiopia
Saxafiyiin Tababar ugu furmay Cadaado”SAWIRRO”
Saxafiyiin Tababar ugu furmay Cadaado"SAWIRRO"